Dowladda Imaaraatka Oo Is hor istaag ku sameysay qorshe uu Ra’iisul wasaarihii hore Masar kaga bixi lahaa dalkaas. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Imaaraatka Oo Is hor istaag ku sameysay qorshe uu Ra’iisul wasaarihii hore Masar kaga bixi lahaa dalkaas.
On Nov 30, 2017 933 0
Kalimad gaar ah oo uu baahiyay tvga afka dheer ee Aljazeera ee xaruntiisu tahay magaalada Dooxa ee caasimadda Qadar, uuna jeedinayo ra’iisul wasaarihii hore ee Masar Axmed Shafiiq ayuu ku sheegay in loo diiday inuu ka baxo dalka Imaaraatka.
Shafiiq oo dhawaan sheegay inuu u tartamayo doorashada sanadka 2018 ka dhici doonta dalka Masar ayaa maamulka Abuu Dubai wuxuu u diiday inuu ka baxo dalka Imaaraatka, oo shantii sano ee lasoo dhaafay uu ku sugnaa.
Shafiiq wuxuu sheegayay inaanu garaneynin sababta rasmiga ah ee keeneysa in loo diido inuu safro, si uu u guto waajibaatkiisa uu ku tilmaamay dastuuriga oo ay kamid tahay inuu la kulmo jaaliyadaha Masaarida ee wadamada caalamka.
Axmed Shafiiq ra’iisul wasaarihii hore Masar oo hadlayay ayaa sheegay inuu aad uga xunyahay faragelinta Imaaraatka ay ku heyso siyaasadda dalka Masar iyo madax banaanidiisa, isagoona ku baaqay in laga qaado xayiraada lagu soo rogay.
Dhanka kale dowladda Imaaraatka ayaa jawaab deg deg ah oo kulul waxay ka bixisay warka Axmed Shafiiq, wasiiru dowlaha arimaha dibadda ee Imaaraatka Anwar Qarqaash ayaa bartiisa twitterka wuxuu kusoo qoray qoraal uu ku beeninayo iney is hor taageen safarka uu damacsanaa inuu Imaaraatka kaga ambabaxo Axmed Shafiiq.
Qarqaash wuxuu Shafiiq ku tilmaamay doqon liita oo aan lahayn wax abaal ah, isagoona intaa ku daray in wax lala yaabo ay tahay warka Shafiiq.